हाम्रो बारेमा - Radio Unity 92.2MHzRadio Unity 92.2MHz
अहिलेको युग सूचना, सञ्चार र प्रविधिको युग हो । प्रबिधिसँग बाँधिएर मानिसहरु सु–सूचित भईरहेका छन् । आम नागरिकमा सूचनाको पहुँच बढ्दै गएको छ । अहिले सूचना प्रवाहका लागि बिभिन्न माध्यमहरु छन् । ती मध्ये नेपालमा सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको रेडियो नै हो ।
रेडियो नागरिकका लागि निकै भर पर्दो माध्यमको रुपमा स्थापित छ । सहर बजारका नागरिकहरुले सञ्चार माध्यमका अन्य साधनहरु पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएपनि नेपालका ग्रामिण भेगका लागि रेडियो एउटा असल साथीको भूमिकामा छ भन्न सकिन्छ ।
रेडियोले सूचना, ज्ञानगुनका बिषयबस्तु सँगसँगै मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्ने भएकाले बालबालिका देखी बृद्धबृद्धाहरु सबैका लागि उपयुक्त सञ्चार माध्यमको साधन बनेको देखिन्छ । अझ भन्नुपर्दा, स्थानिय भाषालाई नै प्राथमिकताका साथ रेडियोहरुले सूचना तथा मनोरञ्जनका सामग्रीहरु प्रसारण गर्दा स्थानिय स्तरमा स्थानिय रेडियोहरुको भूमिका झनै प्रभावकारी देखिन्छ ।
त्यसमा पनि सामुदायिक रेडियोहरुकोे भुमीका सम्मान योग्य छ । समाज परिवर्तनका लागि सामुदायिक रेडियोहरुले खेलेको भूमीका माथि पनि सबैले चर्चा नै गर्ने गर्दछन् । सामुदायिक रेडियोहरुले अहिले समाजका बिषयबस्तु नै उठानमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । समाजमा रहेका नागरिकका आवश्यकताका बिषय के हुन ? कस्तो अवस्थामा छन् ? आदि ईत्यादी बिषयमा केन्द्रित छन् सामुदायिक रेडियोहरु ।
नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक हो, जहाँ अधिकांश मानिसहरुले कृषि खेती गर्छन् । तर बिडम्बना खाद्यान्नमा नेपाल अझै आत्म निर्भर बन्न सकेको छैन् । कारण हो, पुरानै प्रबिधिको प्रयोगले कृषि उत्पादन गर्नु । नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक भएकाले अहिले सरकारले पनि कृषिमा निकै जोड दिएको देखिन्छ । यसै अवसरलाई जोडेर सरकारको कृषि प्रतिको लगानीलाई ध्यानमा राख्दै सरकार र कृषक बीचको पूलको काम गर्न डडेल्धुरा जिल्लामा सामुदायिक रेडियोको रुपमा सबैको साझा आवाज नारा लिएर रेडियो युनिटी स्थापना भएको छ ।
डडेल्धुरा लगायत सुदूरपश्चिममा राम्रो पर्यटकिय सम्भाना छ । राज्यले कहिले यस क्षेत्रलाई राम्रो व्यवहारले हेर्न चाहेन् । यहाँको पर्यटकिय सम्भावना बारे राज्य कहिले पनि महत्व राख्न चाहदैन् । त्यसैले, पर्यटकिय क्षेत्रलाई पनि आफ्नो तवरबाट गर्न सकिने प्रयासका लागि मिडियाको भुमिका देखाउन पनि यो रेडियो स्थापित छ ।
हाम्रै नेपाली दाजुभाईहरु ठूलठूला बिद्धान पनि भइसकेका छन् । तर यस क्षेत्रका नागरिक अझै पढ्ने अधिकारबाट बञ्चित छन् । हामी कुन खुट्किलोमा छौँ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अब नागरिकलाई सु–सूचित पार्ने देखी निकायलाई घचघच्याउने काम सञ्चारले गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पनि यो रेडियो सञ्चालित छ ।
पश्चिम नेपाल मिडिया अभियानद्धारा वि.स.२०७२ मा नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको यो सामुदायिक रेडियो हो । रेडियो युनिटी ९२.२ मेगाहर्जले नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट २०७२ भाद्र १७ गते प्रशारणको ईजाजत पाएको हो । उल्लेखित निती नियम पालन गर्दै परिक्षण प्रसारण समय पूरा गरी वि.स.२०७३ चैत्र १३ गते देखी रेडियो नियमित प्रसारणमा आएको हो ।
डडेल्धुरा सदरमुकाम खलंगामा प्रसारण स्टेशन रहेको यस रेडियोको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन ९२.२ मेगाहर्ज हो । अनलाईन सर्भर मार्फत ईन्टरनेटमा www.radiounity.com.np बाट विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि रेडियोलाई सुन्न सकिन्छ । यो रेडियोको स्टेशन डडेल्धुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिका वडा नं.५ खलंगामा रहेको छ ।
जिल्लाको नक्साङ्कनका आधारमा पूर्वमा डोटी, पश्चिममा भारत, उत्तरमा बैतडी जिल्ला तथा दक्षिणमा कञ्चनपुर जिल्ला रहेको डडेल्धुरा जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गाबाट सञ्चालित एफएम रेडियो स्टेशन रेडियो युनिटी ९२.२ मेगाहर्ज एफएम बेण्डबाटै सुदूर र मध्यपश्चिमका धेरै ठाउँमा सुन्न सकिन्छ ।
डडेल्धुरा जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाबाट सञ्चालित ‘सबैको साझा आवाज’ रेडियो युनिटी एफएम ९२.२ मेगाहर्ज कृषि क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने एक मात्र रेडियो स्टेशन हो । यस जिल्लामा तीन वटा अन्य सामुदायिक रेडियोहरु संचालनमा रहेका भएपनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा समेट्न नसकिरहेको अवस्थामा समग्र कृर्षि क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै रेडियो युनिटीको स्थापना भएको हो ।
यसका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, विकास निर्माण तथा अन्य महत्वपुर्ण क्षेत्रहरुलाई समेत यसले आफ्नो क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । कृषि क्षेत्रका साथै विकासका पूर्वाधारहरुमा विषेश वहस, छलफल र निष्कर्षमा जोड दिने यसको मुख्य ध्येय हो भने कु–कार्य, कुरीती, असुरक्षा, हत्या, हिसां चेलिबेटी बेचविखन, भ्रष्टाचार लगायतका सामाजिक बिषयमाथीको धारिलो प्रहारका साथै समय सापेक्ष रहस्य, व्यङ्गय, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ । साथै आवाज विहीनका आवाजहरु र चपेटामा पारिएका बालबालिकाहरुको हक–हितमा आवाज वुलन्द पार्ने यसको अर्को लक्ष्य रहेको छ ।
प्रसारण क्षमता, प्रसारण क्षेत्र र स्रोता :–
रेडियो युनिटी पहाडि जिल्ला डडेल्धुराबाट ५०० वाट क्षमतामा सञ्चालित छ । यो एफएम स्टेशन डिजिटल प्रबिधिका बिद्युतीय उपकरणहरुबाट प्रसारणमा रहेको छ । डडेल्धुरा जिल्लाबाट प्रसारणमा रहेको यो रेडियो डिजिटल ट्रान्समिटर र कम्प्रेसर तथा क्याभेटि फिल्टर जडित छ । जसका कारण सुदूर–पश्चिमकै सबैभन्दा बढी कभरेज रहेको रेडियोको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।
सुदूर–पश्चिमका, डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ्ग, दार्चुला, अछाम, र बाजुराका पुरै क्षेत्र र कञ्चनपुर, कैलालीका केही भागका साथै मध्यपश्चिमका दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, कालिकोट र बर्दिया लगायतका केही अन्य क्षेत्रमा समेत सुन्न सकिने प्रशारण क्षमता यस रेडियोको रहेको छ । यस्तै छिमेकी भारतीय भू–भाग उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेश लगायतका सीमा क्षेत्रमा पनि रेडियो युनिटीको प्रसारण एफएम बेण्डबाटै सुन्न सकिन्छ । तोकेर स्रोता संख्या भन्न गाह्रो हुने भएको हुँदा यत्ति नै छन्न भन्न नसकिए पनि प्रसारण क्षमताको आधारमा यस रेडियोका लाखौँ स्रोताहरु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
रेडियोले आफ्नो समाचार बुलेटिन कार्यक्रम मार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरेको छ । साथसाथै बिभिन्न विकासे कार्यक्रमहरु पनि उत्पादन तथा प्रसारण रेडियो आफैले गरिरहेको छ । स्रोतालाई पहिचान गर्दै बिभिन्न उमेर समुहका मानिसलाई सुहाउने खालका कार्यक्रम पनि रेडियोले प्रसारण गरिरेहेको छ ।
ख) बिषेश गरी कृषि क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै स्थापित रेडियो युनिटीको पहिलो श्रोता कृषक वर्ग नै हुन् ।
ख) त्यसपछि हास्य,व्यङ्गय, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुसँगै वहुभाषी आवाजहरुमा विभिन्न सूचना, सन्देश र समाचारहरु ।
ग) लक्षित वर्ग बाल–बालिका देखी वृद्ध अवस्था सम्मका सबै मानिसलाई समेटिने कार्यक्रमहरु ।
प्रसारण भाषा :–
क) यस रेडियोले अहिले सम्म दुई वटा भाषामा समाचार र रेडियो कार्याक्रम प्रसारण गरिरहेको छ । साथै दुई वटा भाषाहरु, डोट्याली र नेपालीमा सूचना र शन्देसहरु पनि तयार पारी प्रसारण गर्दै आएको छ ।
लक्ष्य र उद्देश्य :–
क) कृषि पेशालाई व्यवसायिकतामा लैजाने प्रेरित गरी आर्थिक संमृद्धिसंग जोड्न पहल गर्ने ।
ख) सार्वजनिक चाँसोका बिषय तथा विकासका पूर्वाधारहरुमा विशेष वहस, छलफलमा जोड दिने ।
ग) भ्रष्टाचार कु–कार्य, कुरीती, असुरक्षा, हत्या, र हिंसा जस्ता विकृती हटाई भव्य र सभ्य समाज निर्माणमा आवाज उठाउने ।
घ) गरिबीको चपेटामा परेका वाल–वालिकाहरु र आवाज विहीनका आवाजहरुलाई सूचनाको हक मार्फत विमुख नराख्ने ।
ङ) चेलिवेटी बेचविखन, महिला तथा मानव अधिकार हनन् र जातिय विभेद, सामाजिक अन्धविश्वास लगायतका सामाजिक विकृती विसंङ्गती विरुद्ध धारिलो प्रहार,
च) जनताको असली सूचक, समयको सूचना समयमै, साथमा हास्य व्यङ्गय मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, सम्पुर्ण जनताको असली, भरपर्दो, जनमैत्री, सत्य सूचनाको साथमा रेडियो युनिटी एफएम ९२.२ मेगाहर्ज ।
कर्मचारी बारे जान्न चाहेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : रेडियो युनिटी ईन्टरनेटमा सुदूरपश्चिमै पहिलो स्थानमा